Nuqul xogtaada si toos ah ugaga duub iphone-kaaga hore kan cusub. | Wararka IPhone
macruufka 12.4: Xogtaada si toos ah uga duub iPhone-kaaga hore kan cusub.
Toni Cortés | | macruufka 12, iPhone
Hadda macruufka 12.4 waxaad si toos ah ugu wareejin kartaa xogtaada iPhone-kii hore kan cusub.
Ugu dambeyntiina, muddo kadib marxaladda tijaabada, hadda waad cusbooneysiin kartaa iPhone-kaaga nooca ugu dambeeyay ee iOS: 12.4. Tani waxay noqon doontaa casriyeyntii ugu dambeysay ee iOS 12, kahor imaatinka bisha Sebtember ee la filayo iOS 13.
Cusboonaysiinta ugu wanaagsan ee horumarintani waxay diiradda saareysaa nidaamka cusub ee wareejinta xogta moobiilka-moobiilka. Haddii aad iibsato terminal cusub, gudbinta dhammaan xogta hadda way fududahay.
Apple marwalba way ka walwalsan tahay bilaabida qalab cusub waa sida ugu fudud ee suurtogalka ah. Waxaan horeyba uga hubineynaa Apple Watch, Apple TV, iwm, halkaasoo ay tahay inaad kaliya ku haysato iPhone-kaaga marka aad bilowdo mid ka mid ah qalabkan markii ugu horeysay, si xogtaada (Apple id, passwords, wifi, iwm) .) Waxaa si otomaatig ah loogu wareejiyaa qalabkaaga cusub oo leh tufaaxa.
Ilaa hadda, markii aad bedeshay boosteejada, waxaad ku sameysay gurmad iCloud ama kumbuyuutarkaaga adoo adeegsanaya iTunes, oo waxaad dib u soo celisay nuqul la yiraahdo terminal-kaaga cusub. Shaqo fudud oo aamin ah, laakiin waxaad u baahnayd inaad ka hesho meel daruurta ah ama kombuyuutar wareejinta ah. Kordhintaan cusub, waxaas oo dhan hadda looma baahna. Si fudud u xooji taleefankaaga cusub kii hore ee kuu dhawaa, nidaamkuna wuxuu ogaan doonaa iPhone-kii hore silig la'aan. Haddii aad rabto, ku xir labada aalad adoo isticmaalaya fiilada danabka oo wuxuu yiri gudbinta ma sii ahaan doonto Bluetooth ama WIFI toos ah, laakiin waxay ku xirnaan doontaa fiilada. Sida iska cad, waxay ku weydiin doontaa lambarka sirta ah ee Apple ID-kaaga ee terminal-ka cusub, qaabeynta lambarka marin-u-helka, iyo haddii aad rabto, Aqoonsiga Face-ka ama Aqoonsiga Taabashada waxay kuxirantahay tusaalaha.
Halkan, waxaad fursad u leedahay inaad ka wareejiso xogtaada iCloud, ama isticmaal xulashada tooska ah ee wareejinta tooska ah. Mar dambe uma baahnid inaad haysato nuqul daruurta dhexdeeda, (in kasta oo si weyn loogu taliyay inaad mid maalin walba sameyso, si otomatig ah) ama aad u dhex gasho kombuyuutarkaaga. Dhamaan sawiradaada, codsiyadaada, dukumiintiyada, furaha sirta ah iyo dejimaha waxay kujiraan terminal-kaaga cusub si lamid ah kii hore. Taasi way fududahay.
Waa in la ogaadaa in wareejintan aysan ku jirin mugga dhammaan xogta ay codsiyada ku jiraan. Kaliya madaxa cinwaanka ayaa la wareejiyaa. Mar haddii mobiilku cusub shaqeynayo, wuxuu si otomaatig ah u rakibayaa barnaamijyadii aad ku haysatay iPhone-kaaga hore ee ka yimid Apple Store.
Khasaaraha kaliya ayaa ah inaad ubaahantahay labada terminaal in lagu cusbooneysiiyo iOS 12.4. Moobaylkii hore wax dhib ah ma jiri doono, waxaad ka walwalaysaa inaad heysato ilaa taariikhda, laakiin terminalka cusub, illaa dhammaadka bisha Ogosto Apple kuuma xaqiijinayso in taleefannada cusub ay horey ula yimaadeen cusbooneysiintan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 12 » macruufka 12.4: Xogtaada si toos ah uga duub iPhone-kaaga hore kan cusub.
Shirkadda Netflix ayaa qorshaynaysa qorshe cusub oo moobiil oo keliya laga hirgelin karo gudaha Hindiya
Dib u eegista sameecadaha Powerbeats Pro: tayada iyo ismaamulka ayaa ku yimaada qiimo